Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Horjoogaha KISS Gene Simmons: Anti-vaxxers waa cadow!
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dadka inkira jiritaanka COVID-19 oo raba inay faafiyaan fayraska waa shar, "cadow" oo ay tahay in la aqoonsado oo la kashifo.
Dadka si bareer ah dadka kale ugu muujiya halista COVID-10 waa 'xun'.
Laguuma ogola inaad qofna qaadsiiso sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inaad leedahay xuquuqo dhalanteed ah.
Hadalada Simmons ayaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee ka yimid xerada dadka caanka ah ee ku qulqulaya diidmada tallaalka.
Gene Simmons, hormoodka kooxda halyeeyada ah Kiss, ayaa ku canaantay anti-vaxxers kuwaas oo si ula kac ah dadka kale u soo bandhigay khatarta caabuqa COVID-19.
Dadka diida jiritaanka COVID-19 oo raba inay faafiyaan fayraska waa shar, Simmons ayaa yidhi, isagoo ugu yeedhay anti-vaxxers "cadow" oo ay tahay in la aqoonsado oo la kashifo.
"Lagama oggola inaad qof qaadsiiso sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inaad leedahay xuquuqo khiyaali ah," Kiss Horjooge ayaa yidhi.
Arrintu waxay ku soo korodhay 'TalkShopLive' iyadoo Simmons uu ka hadlayay 'KISS Kruise' ugu dambeeyay iyo sida taageerayaasha doonaya inay ka qaybgalaan mid hadda looga baahan yahay inay noqdaan. la tallaalay. Waxa uu sheegay in aanay waxba ka duwanayn xeerarka u baahan in suunka lagu xidho ama in aan lagu cabbin dhisme.
Waxyaalahan oo kale waa la igmaday “ma aha sababtoo ah waxay rabaan inay kaa qaadaan xuquuqdaada - taasi waa sababta oo ah intayada kale ayaa neceb. Ma doonayno inaan urno qiiqaaga,” Simmons ayaa yidhi.
"Ma doonayo inaan qaado cudurkaaga," 72-jirka madadaalada ah ayaa yiri. "Ma doonayo inaan nafteyda halis geliyo sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad dhex marto iftiin cas."
Wuxuu u soo jeediyay dadka diida tallaalada waa in "lagu aqoonsadaa oo bannaanka la soo geliyaa."
"Ogow cidda ay yihiin saaxiibbadaa sida ay kuu danaynayaan. Taas waxaa ku jira COVID-19, ”Simmons ayaa yidhi. "Haddii aad diyaar u tahay inaad nagu dhex socoto adigoon la tallaalin, waxaad tahay cadow."
Hadalada Simmons ayaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee ka imaanaya xerada dadka caanka ah ee ku qulqulaya diidmada tallaalka. Daawadeyaasha TV-ga British-ka ah ee Piers Morgan ayaa jimcihii ku qarxiyay iyaga oo ah "koox aan lafdhabar lahayn" oo aan u qalmin awoowayaashood geesinimada leh.
Nofeembar 12, 2021 at 19: 43
Anigu ma ihi anti-vaxxer. Si kastaba ha ahaatee waxaan u maleynayaa in fikradaha Mr Simmons ay khaldan yihiin. Haddii aad rabto inaad qof cadow ka dhigto cadawgu waa dadka maan-gaabyada ah ee is tallaalaya iyagoon samayn wax cilmi-baaris ah oo iyaga u gaar ah oo sidaas u sameynaya sababtoo ah waxaa loo sheegay inay tahay. Covid si aad ah ayaa looga hortagi karaa iyadoo la ilaalinayo heerka fitamiin D ku filan. Caddaynta waxay u taal qof kasta oo raba inuu raadiyo. Waxa kale oo ay u muuqataa in dhammaan sababaha dhimashada ay ka sarreeyaan kuwa la tallaalay marka loo eego kuwa aan la tallaalin. Ugu dambayntiina tallaalku kuma siinayo difaac. Markaa waad qaadi kartaa oo aad ku faafi kartaa dadka kale waana sidaan waxa dhacaya.